Isingeniso sokuqashelwa kobuso kumakhamera we-body-Worn | Izixazululo ze-OMG
Isingeniso sokuqashelwa kobuso kumakhamera we-body-Worn
Ukuqashelwa kobuso uhlelo lokusebenza lwe-biometric software olukwazi ukukhomba ngokukhethekile noma ukuqinisekisa umuntu ngokuqhathanisa nokuhlaziya amaphethini ngokuya ngobuso bomuntu. Ukuqashelwa kobuso kusetshenziselwa izinhloso zokuphepha, kepha futhi kuyasiza ekutholeni abantu abalahlekile. Eqinisweni, ubuchwepheshe bokuqashelwa ubuso buthole ukunakwa okukhulu njengoba bunamandla ezinhlobonhlobo zezicelo ezihlobene nokuphoqelelwa komthetho kanye namanye amabhizinisi.
Amakhamera wokuphepha aqashelwa ebusweni angabamba ngekhanda ubuso babantu abathandekayo, amanethiwekhi amalungu eqembu lezigelekeqe, abefuna izigebengu nabasolwa ngamacala. Ithuluzi lixwayisa abanikazi bebhizinisi lapho abantu abangavumelekile befika empahleni yabo.
Kusebenza Kanjani Ubuso
Phakathi kokukhathazeka ngobumfihlo nokunemba, kubalulekile ukuqonda ukuthi ukubonwa kobuso kusebenza kanjani. Ukuqashelwa kobuso kuncike kubuchwepheshe obuningana ukusebenza: Uhlelo lokuthwebula isithombe (ikhamera noma ukubhekwa kwevidiyo), ubuhlakani bokufakelwa nokufunda komshini. Amamephu wokuqashelwa kobuso amamephu wobuso asuka esithombeni noma kuvidiyo bese uwaguqula abe idatha ye-biometric yedijithali. Iqhathanisa lesi siginesha yedijithali nedathabhethi yobuso obaziwayo ukuthola umentshisi.
Kunezinyathelo ezine eziyisisekelo zokuqashelwa ebusweni:
Uhlelo luthwebula isithombe sobuso bakho njengoba udlula. Lokhu kungaba isithombe sevidiyo noma isithombe.
Isoftware yokuqashelwa kobuso ifunda iJiyomethri yobuso bakho. Ibheka izinto ezifana nebanga phakathi kwamehlo akho, ibunzi ukuya ekuphakameni kwe-chin, nezimpawu zomumo wobuso ukuthuthukisa isiginesha yobuso bakho bedijithali.
Isiginesha yakho yobuso, ifomula yezibalo zazo nama-zeros akhethekile kuwe, bese iqhathaniswa nedathabhesi yobuso obaziwayo.
Uhlelo luquma ukuthi ungubani.
Ungakusebenzisa kuphi ukuqashelwa kobuso?
Izikhumulo zezindiza zingenye yezindawo ezigcwele kakhulu abantu. Isibalo esandayo sabantu sandisa nengozi yezinkinga zokuphepha. Noma isikhumulo sezindiza sihlome ngamathuluzi okubheka, amakhamera we-CCTV, nezinye izinhlelo zokuphepha, kukhona ukuvuza okukhona. Ngokuthunyelwa kobuchwepheshe bokubona ubuso ngobuso, ukuphepha esikhumulweni sezindiza kungathuthukiswa. Kufakwa amakhamera ngaphakathi emabhasini edolobha, amabhasi esikole, amabhasi omphakathi, izikebhe, izikebhe, nezitimela ukuskena ubuso babagibeli nokuziqhathanisa nesizinda sezithombe. Uma kukhona umuntu ofunwayo, umshayeli nabaphathi abathintekayo bayaziswa.
Ukuqashelwa kobuso ekuqaleni kwakudalelwe isiqinisekiso sobunikazi nokulawula ukungena, ukusebenza ezimeni ezilawulwayo nokuqinisekisa ukuthi umuntu ungubani ukuthi ungubani. Manje amakhamera askena izixuku, aqhathanisa bonke ubuso obudlulayo nohlu lokubuka.
Ama-ejensi amaningi okuphoqelela umthetho asebenzisa ukuqashelwa kobuso ukuhlaziya okuqoshiwe kwamavidiyo, okonga isikhathi namandla, kunzima kakhulu ukusebenzisa ngesikhathi sangempela, emhlabeni wangempela. Izibalo zokubheka wonke umuntu odlulayo endaweni yomphakathi egcwele abantu ngokumelene nohlu lwamawashi amancane zisunduza ukuqashelwa kobuso emikhawulweni yayo. Kuphela i- “Mini WIFI / GPS / 3G / 4G Camera-Worn Camera - Ukuqashelwa Kobuso (BWC058-4G)”Ikwazi ukubekezelela.
Ngokuphikisana nokuqashelwa kobuso, ama-bodycams asekubonile ukwamukelwa ngobuningi. Lawa madivayisi egqokwa ngomzimba manje afaka umfaniswano wamaphoyisa emhlabeni wonke, ahlinzeka ngokulawulwa kobufakazi, ukuphepha kwamaphoyisa, nokuqinisekiswa komphakathi. Ama-bodycams aqopha i-footage yokulayishwa emzimbeni ngokomzimba Amanye ama-bodycams nawo abukhoma asakaza ividiyo emuva kumakamelo okulawula. Abanye baxhuma kuzithonga zezikhali ukwenza ngokuzenzakalela ukuqoshwa kwevidiyo. Njengoba amadivaysi eselula avela, amamodeli amasha we-bodycams asuselwa kuma-platform we-smartphone asethelwe ukuba abe namandla ngokwengeziwe. Lokhu kusho ukuthi ezobuchwepheshe ezimbili zizohlangana. Ukuqashelwa kobuso kumzimba wesidumbu kuyisinyathelo esilandelayo esilandelayo. Ukuhlomisa izikhulu ngezinhlu zamawashi ezigebengu ezifunwayo, abantu abanentshisekelo, izingane ezilahlekile, abantu abadala abasengozini.
Ukusetshenziswa kokuqashelwa kobuso kwizithunzi zomzimba nakho kuyasivikela ekumangaleleni kobuhlanga. Izinqubomgomo zingasethwa ukuvikela abaphathi abasesha abangakhonjwa ngokuqashelwa kobuso, noma bemisiwe. Lapho kusolwa khona ukuthi kumiswa futhi kuseshe ubugebengu obusezingeni eliphansi emiphakathini ethile, ukuqashelwa kobuso kumzimba wesidumbu kunikeza ibhalansi. Yilolu hlobo lokuphepha oluzosiza ukwamukelwa okubanzi.
Ukuqashelwa kobuso kumakhamera asemzimbeni kuzophinde kunikeze ukuqinisekiswa kwesibili kwemidlalo evela ezimotweni zokubhekwa kwamakhamera we-CCTV. Ngemuva komdlalo wokuqala, iphoyisa elihamba ngezinyawo lisondela kulowo muntu bese ligijimisa isheke lesibili kwikhamera yomzimba, lisuka kulolo hambo olufanayo. Kuphela uma kukhona umdlalo kukhona noma yini ethathwa ngokuqhubekayo. Ngokwami, lokhu kuvikela kakhulu ezibonakalayo ekuzibizeni ngamanga okuthiwa ngamanga. Kuhlinzeka nomuntu ngokubambisana nomuntu ngaphambi kokuthi kuthathwe isinqumo sokugcina ngokuboshwa.
Isizukulwane sokuqala sama-bodycams asebenzayo namuhla sigxile ekuqopheni ividiyo yezinhlelo zokuphathwa kobufakazi. Manje, i-Bodycam isusa ukugxila ekusakazeni ividiyo bukhoma, ukubonwa kobuso, nakwi-Edge-AI yedivayisi. Lesi sizukulwane esilandelayo se-IoT (i-intanethi yezinto) ama-bodycams azojoyina izigidigidi zamanye amadivayisi we-IoT azosetshenziswa kumanethiwekhi we-4G ne-5G eminyakeni ezayo. Idizayinelwe ukuxhumeka ngenethiwekhi, ukwabelana ngemininingwane, ukuhlukanisa ukucubungula kusuka emaphethelweni kuye enkabeni, lawa madivayisi azoguquka asuswe ekurekhodweni kwevidiyo okuthi 'uma kwenzeka kwenzeka' aqonde kuthuluzi elibalulekile lobuphoyisa.
Futhi ngakho-ke, maqondana nobuphoyisa, Iminyaka ezayo izomakwa njengendawo yokuguqula ukuqashelwa kobuso. Ukuhlolwa kuzothuthukisa ukuthunyelwa. Ukusetshenziswa kuzoletha imiphumela. Izimpikiswano zizowinwa. Iningi lomphakathi, ekugcineni, lizokhetha ukuphepha komuntu siqu nokuphepha kunemfihlo engenakuphikiswa. Ngemuva kwezingcingo eziningi zemikhawulo kanye nomthethonqubo, ucwaningo olushicilelwe ngaphambi kwezinyanga ezithile luthole ukuthi ama-18% kuphela abantu baseMelika abakholelwa ukuthi ukubonwa kobuso kufanele kukhawulelwe ngokuqinile ukuphepha komphakathi. Yilapho izidumbu zomzimba zizongena khona. Uma besingaqeqesha amaphoyisa ethu ukuthi abone wonke umuntu owonile, wonke umuntu ongaziwa onentshisekelo kuye, wonke umuntu omdala osengozini noma ingane elahlekile, ukuya ezingeni elingama-99% noma ngaphezulu.
Izinzuzo Zokuqashelwa Ubuso
Ukwanda Kwezokuphepha: Enye yezinzuzo ezinkulu zobuchwepheshe bokuqashelwa kobuso ukuthi kuthuthukisa ukuphepha nokuvikeleka. Ukusuka kuma-ejensi kahulumeni kusetshenziswa komuntu siqu, kunesidingo esandayo sokuphepha okuphezulu nezinhlelo zokubhekwa. Izinhlangano zingabona kalula futhi zilandelele noma ngubani ongena kule ndawo, futhi angahlaba umkhosi kalula izivakashi ezingamukelekile. Kungasiza kakhulu uma kuziwa ekutholeni amaphekula angaba khona. Futhi, akukho ukhiye, ibheji, noma iphasiwedi engantshontshwa noma ilahleke.
Kuyashesha futhi Kunembile: Ngenxa yesidingo esikhula njalo ngesivinini kanye nenani elikhulayo lama-cyberattacks, ukuba nobuchwepheshe obushesha futhi obunembile kubalulekile. Ubuchwepheshe bokubona ubuso bunikeza ukuqinisekiswa okulula, okusheshayo, futhi okunembile. Noma kungenzeka, kunzima kakhulu ukukhohlisa ubuchwepheshe bokuqashelwa kobuso, okwenza kube yinzuzo ukusiza ukuvimbela inkohliso.
Akukho oxhumana naye: Ukuqashelwa kobuso kukhethwa ngaphezu kokuthwetshulwa kweminwe ngomunwe ngenxa yenqubo yayo engeyona yokuxhumana. Abantu akudingeki bakhathazeke ngezithiyo ezingaba khona ezihlobene nobuchwepheshe bokuthola iminwe, njengamagciwane noma amamaki.
Izindleko Eziphezulu Zokusebenzisa: Ukubonwa kobuso kudinga amakhamera wekhwalithi ephezulu kanye nesoftware ethuthukile ukuqinisekisa ukunemba nesivinini. Kodwa-ke, i-Allied Market Research ibikezela ukuthi ukuthuthuka kwezobuchwepheshe kungenzeka kunciphise izintengo zezinhlelo zokubona ubuso ngokuzayo.
Isitoreji sedatha: Ividiyo nezithombe ezisezingeni eliphakeme ezidingekayo ukuqashelwa kobuso zithatha inani elikhulu lokulondolozwa. Ukuze amasistimu wokuqashelwa ebusweni asebenze kahle, asebenza kuphela nge-10 kuya ku-25% yamavidiyo. Lokhu kuholela ezinhlanganweni ukuthi zisebenzise amakhompyutha amaningi ukucubungula konke futhi akwenze ngokushesha.
Izinguquko Ekubukekeni nakwikhamera: Noma iziphi izinguquko ezinkulu ekubukekeni, kufaka phakathi izinwele zobuso kanye nezinguquko zesisindo, zingalahla ubuchwepheshe. Kulezi zimo, kudingeka isithombe esisha. I-angle yekhamera nayo ingadala izingqinamba ngoba ama-engeli amaningi ayadingeka ukubona ubuso.
Okwamanje awukho umthetho obhekana ngqo nokulawulwa nokuphathwa kwamakhamera agqokwa ngumzimba wamaphoyisa. Umthetho ubonakala ususondele kakhulu ijubane okusheshayo lapho kuthuthukiswa khona ubuchwepheshe bokuqapha, njengamakhamera agqokwa ngomzimba. Ukungabikho komthetho ofanele kudala ingozi yokuthi ubumfihlo babantu bungabekwa engcupheni ngenxa yokwamukelwa kobuchwepheshe obusha bokuqapha.
Ukuqashelwa ebusweni ubuchwepheshe obunamandla kepha kufanele kusetshenziswe ngobuhlakani. Ngakolunye uhlangothi, kuletha inzuzo enkulu ezinkampanini nakubasebenzisi bokugcina, kuyabasiza ukuthi bathuthukise ukuphepha kwabo futhi babhekelele phansi labo abanamacala. Ngakolunye uhlangothi, ingasetshenziswa kabi ukuze isizakale futhi iholele emiphumeleni ethile emibi. Kuzothatha okungenani iminyaka engu-5 ukuthi ukuqashelwa kobuso kufike ekuvumelaneni okuphelele namalungelo abantu kanye nemfihlo yomuntu.
Amakhamera agqokwa ngomzimba aqashelwa ebusweni ukuthi asetshenziswe kahle futhi anciphise imiphumela emibi engahle ibe yengozi futhi eyimfihlo, kumele kufakwe umthetho ofanele obhekana ngqo nokusetshenziswa kwalawa madivaysi. Kukhona amathuba okuba amakhamera agqokwa ngomzimba abe yithuluzi eliwusizo lokufeza ukuziphendulela okungcono; kepha-ke, lokhu kungenzeka kuphela uma imigomo eyimfihlo efanelekile inikezwa ngumthetho.
Anon., Nd Umbiko Wezokuphepha Emhlabeni. [Online]
Itholakala ku: http://www.worldsecurity-index.com/shareDir/documents/15508405770.pdf
Itholakala ku: http://www.bwvsg.com/resources/procedures-and-guidelines/
Itholakala ku: https://becominghuman.ai/the-threats-and-benefits-of-facial-recognition-what-should-we-know-17008f69ae74
Doffman, Z., nd [Online]
Itholakala ku: https://www.forbes.com/sites/zakdoffman/2019/01/10/body-worn-2-0-how-iot-facial-recognition-is-set-to-change-frontline-policing/#4e0a5cad1ff3
Marr, B., nd Forbes [Online]
Itholakala ku: https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2019/08/19/facial-recognition-technology-here-are-the-important-pros-and-cons/#28c79e8e14d1
Iqembu, RM, 2019. I-RTI. [Online]
Itholakala ku: https://www.1rti.com/pros-cons-of-facial-recognition-technology/
UWendt, R., 30 jut 2019. UKUDAYISWA KWEZOKUPHEPHA NOKUXHUMANISA. [Online]
Itholakala ku: https://www.securitysales.com/news/facial-recognition-tech-scrutiny/
Isingeniso sokuqashelwa kobuso kumakhamera we-body-Worn igcine ukuguqulwa: Disemba 3rd, 2019 by admin
Ukubuka okuphelele kwe-4704 Ukubuka kwe-21 Namuhla